Fil d'actualités du 18/01/2019
18/01/2019 - 15:30 : NICOLAS SARKOZY: Efa tonga eto Madagasikara i Nicolas Sarkozy, Filoham-pirenena frantsay teo aloha izay hanatrika ny fianianan'i Andry Rajoelina rahampitso.
18/01/2019 - 11:00 : HANITRA RAZAFIMANANTSOA: Tonga niarahaba ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Hanitriniaina Razafimanantsoa noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2019 ny fikambanan'i Iarivo Miray, eo amin'ny Antenimierampirenena.
18/01/2019 - 10:30 : IAVOLOHA: Hatao anio eny amin'ny Lapan'Iavoloha ny fifamindram-pahefana eo amin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny vaovao Andry Rajoelina
18/01/2019 - 10:00 : FIANIANANA: Filoham-pirenena miisa 6 avy aty Afrika no hanatrika ny fianianan'i Andry Rajoelina rahampitso: -Alpha Condé (Guinée) -Edgar Lungu ( Zambie) -Hage Geingob (Namibie) -Azali Assoumani (Union des Comores) -Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (Ghana) -Sahle-Work Zewde (Ethiopie).
17/01/2019 - 19:00 : RIVO RAKOTOVAO: Hiverina ho Filohan'ny antenimieran-doholona avy hatrany ny tenany rahampitso hariva aorian'ny fifamindram-pahefana eo amin'ny filoha teo aloha sy ny vaovao, rehefa avy nitazona ny anjara asa maha filoham-panjakana mpisolo toerana.
17/01/2019 - 13:00 : LALAO RAVALOMANANA: Tonga niarahaba ny ben'ny tanana Lalao Ravalomanana tao amin'ny lapan'ny tanana Analakely ny delegen'ny tsena ao amin'ny tsenan'Anosibe. Nisy ny dinik'asa niarahan'ny roa tonta hanatsarana ny fomba fiasa mba ho soa ho an'ny rehetra .
17/01/2019 - 12:00 : MORAMANGA: Lehilahy miisa roa sarona tao amina trano fisotroana nitondra basy sy odigasy, izay voasambotry ny zandary, ka notanana am-ponja vonjimaika taorian'ny nanolorana azy ny fitsarana.
17/01/2019 - 09:00 : BAOLINA KITRA: Azon'ny Juventus de Turin ny amboaran'ny "Super coupe d'Italie" rehefa resin'izy ireo tamin'ny isa 1-0 tamin'ny alalan'ny baolina matin'i Christiano Ronaldo ny AC Milan halina.
16/01/2019 - 18:00 : ANOSIMAHAVELONA: Zazarano iray vao avy nesorina hita nisy nanary teny amoron'ny Ranon'Ikopa teny Anosimahavelona androany.
16/01/2019 - 12:45 : FIFAMOIVOIZANA:Ny fahateren'ny arabe, ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana,ny tsy fanajana firy intsony ny code de la route, ny fitiavan-tena no mampikorontana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy.
Archive du 20181003
Matanjaka Ravalomanana Toran-kovitra ireo mpanenjika azy
Nanelingelina ny mpanao ampihimamba ny harem-pirenena i Marc Ravalomanana satria sahy nampiseho fa mahavita azy sy tsy azo tsinontsinoavina ny Malagasy, ary ohatra velona izy, izay efa tany amin’ny taona 90 dia efa namirapiratra tamin’ny fandraharahana, ka naharomotra ireo vahiny sasany nifehy izany tao anatin’ny 50 taona, toy ny resaka fandraharahana ara-bary.
Antoko Kintana « Tsy maintsy hiady ny gasy ! »
Nisakana fifidianana izahay, hoy ny filohan’ny antoko politika Kintana, Tabera Randriamanantsoa fa tsy nohenoina dia hoy izahay hoe alefaso ary amin’izay ny Malagasy hifanapatapaka.
Sata ifampitondran’ireo kandida Hosoniavina anio
Etsy amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny etsy Anosy no hosoniavin’ireo kandida manaiky azy ilay sata ifampitondran’ireo kandida ho filoham-pirenena mandritry ny vanim-potoam-pifidianana.
Kandida filoham-pirenena Mbola misy tsy manana mpitam-bola
Nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fotoana fizaram-baovao mahakasika ny famatsiam-bola ho an’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana, ny praiminisitra Ntsay Christian, tetsy amin’ny Carlton Anosy omaly.
Dina ara-pitondrantenan’ny kandida Mitovitovy hevitraFaniry Ernaivo…
Ravalo sy Hotontosaina anio eny amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny ny fanasoniavana ilay dina ara-pitondran-tena ho an’ny kandida filoham-pirenena, mba tsy hisian’ny teny fihantsiana, indrindra ny hanajana.
KMMR Andoharanofotsy Vonona ny hampandany ny filoha Ravalomanana
Efa vonona tanteraka amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny Komity Manohana an’i Marc Ravalomanana ao anatin’ny kaominina Andoharanofotsy, distrikan’Atsimondrano.
Aza mampihomehy !
Aza Mahatsikaiky ianareo ry Jean a.. !! Ny anao dia tsy mahalala afa-tsy ny hanangana ity karazan-toerana tsy afaka mandray olona ampy azy ity foana no mahamaika anao.
Tanora Malagasy Tsy ampy fanabeazana ho olom-pirenena
Ny 50%-n’ny vahoaka malagasy dia tanora 18 ka hatramin’ny 35 taona. Maro an`isa ny tanora, ivondronan`ny hery, saingy tanora tsy mahatsapa fa tompon’andraikitra eo anivon’ny firenena sy ny fiarahamonina ny ankamaroany.
Baolina kitra - FMF Nahemotra indray ny fifidianana
Tsy maintsy hahemotra fa tsy hotontosaina amin’ny 27 oktobra ho avy izao araka ny voalaza tany aloha ny fifidianana an’ireo mpitantana vaovao ny baolina kitra Malagasy (ny filohany sy ny mpanatanteraka), hoy ny filohan’ny CNE Baolina kitra, Raherimanana Lala, notronin’ny filoha lefiny, Rakotovao Njaka, nitafa fohy tamin’ny mpanao gazety teny Isoraka omaly talata 2 oktobra 2018.
Famaranana « Telma Coupe de Madagascar » Ny Elgeco Plus no hifandona amin’ny As Adema
Fifanandrinan’ny samy ekipan’Analamanga ny lalao famaranana « Telma Coupe de Madagascar 2018 » hotanterahina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina amin’ny alahady 7 oktobra ho avy izao.
Avaho tsara ny vary sy ny tsiparifary
Miroso mankany amin’ny fifidianana isika ! Mangetaheta fahefana mafy ny ankamaroan’ny mpanao politika, fa mangetaheta fihatsaram-piainana kosa Ramalagasy, izay efa leo kobaka am-bava.
Zotra F - Andoharanofotsy Tafakatra 1.000 Ar ny saran-dalana amin’ny hariva
Raha efa mba milamindamina kely ny fiaraha-miasan’ny mponina amin’ireo taksibe sasany eny Andoharanofotsy toy ny zotra 172, 187 ary ny 137 dia mampitaraina fatratra azy ireo indray ny hafitsoky ny zotra F mandalo eny an-toerana.
Mponin’Andina-Ambositra Nahazo fanafody hiadiana amin’ny bilariziozy
Mponina miisa 24 000, amina fokontany 15 eo anivon`ny kaominina ambanivohitra Andina no nisitraka fanafody maimaimpoana hiadiana amin’ny aretina bilariziozy.
Famatsiam-bolan’ny Vondrona Eoropeanina Misy ezaka maika tsy maintsy atao vao azo ny FED-11
Omaly talata 2 oktobra no nanatanteraka fitsidihana an-dRamatoa minisitry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona tetsy amin’ny biraony Antaninarenina ny ambasadaoro vaovaon’ny Vondrona Eoropeanina, Andriamatoa Giovanni Di Girolamo.
Fifanarahana fiaraha-miombon’antoka ara-toekarena Tombony ho an’ireo firenena manao azy
Maro ny tombony azo amin’ny fifanarahana fiaraha-miombon’antoka ara-toekarena (APE) ataon’ny firenena anankiray. Io APE io mantsy no miteraka ireo fepetra ilaina amin’ny varotra sy ny fandraharahana amin’ireo firenena manao azy.
Raharaham-pirenena sy kolontsaina Tsy afa-misaraka, hoy i Michel Le Dragon
Hankalaza ny faha-50 taona nisiany ato ho ato ny fikambanana Gakama na Gasy ka mahery izay tarihin’ilay andrarezin’ny haiady eto Madagasikara, Maitre Michel Emmanuel na Michel Le Dragon.
Fankalazana ny « Fanjakana gasy » Vokatry ny mpitondra tsy mihaino, hoy ireo mpankato azy
Hotanterahana ny 14 oktobra 2018 izao ao Fianarantsoa ny fankalazana ny fijoroan’ny antsoina hoe « Fanjakana gasy ».
Bodo, Rija Ramanantoanina, Nanie Hihaona amin’ny mpakafy any Paris
Mitohy hatrany ny fankalazana ny faha-30 taona niakaran’i Bodo sy Rija Ramanantoanina an-tsehatra.
Fiangonana manamboara vatsy Mpitandrina fito mianadahy no nosorana ho misionera
Tontosa ny faran’ny herinandro teo ny fankalazana ny tsingerin-taona fahafolo niorenan’ny fiangonana « Manamboara Vatsy » notanterahina teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
Taom-baovao Iraisan'ny Malagasy Hangatahana ho andro tsy fiasana amin’izay
FANAFIHANA TANY TOAMASINA
Manao sesilany ny fanafihana mitam-basy ao Toamasina. Omaly dia «multiservice » iray no nandalovan’ny roa lahy mitam-basy, teo Ampasimazava.
Fotoam-pahavaratra Rivodoza telo no mety handalo eto Madagasikara
Na dia mbola ao anatin’ny vanim-potoanan’ny manasara-taona aza isika eto Madagasikara ankehitriny dia fantatra fa hanomboka hirotsaka kosa ny ranon’orana amin’ny volana novambra ho avy izao raha ny tomban’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro.
Sehatra fiantohana Azo itarafana ny fandrosoan’ny toekarena
Nanatanteraka fiofanana momba ny fiantohana « assurance vie » ireo kaompaniam-piantohana eto Madagasikara omaly talata 2 oktobra tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy. Haharitra 2 andro izy io ary ny orinasa Afrika RE anisan’ny lehibe indrindra eto Afrika no tompon’antoka amin’ny fampiofanana.